एक ब्यक्तिलाई ५० भन्दा बढी युवतीको सेक्स प्रस्ताव ! - Samudrapari.com
एक ब्यक्तिलाई ५० भन्दा बढी युवतीको सेक्स प्रस्ताव !
८८२६ पटक हेरिएको
काठमाडौं – स्कटल्यान्डका एक ब्यक्तिलाई महिलाले सेक्स अफर गरेर हैरान पारेका छन । ४३ वर्षीय मोहम्मद अवदलाई अहिलेसम्म ५० भन्दा बढी युवतीले उनीसँग सेक्स गर्न चाहेको सन्देश पठाएका हुन ।
यसरी महिलाहरु उनीसँग सेक्स गर्न चाहानुको कारण छ, कृत्रिम लिंग । उनको कृत्रिम लिंगप्रति महिलाहरु मोहित भएका हुन। महिलाहरुले कृत्रिम लिंगको अनुभव लिन खोजेका हुन । ४४ वर्षीय मोहम्मदको ६ वर्षको उमेरमा दुर्घटनामा परेपछि लिंग काटिएपछि उनले हालसालै कृत्रिम लिंग राखेका हुन । जब उनीसँग कृत्रिम लिंग भएको हल्ला चल्यो, त्यसपछि युवतीहरुले यसको अनुभव लिन यौनसम्पर्कको प्रस्ताव राखेको एजेन्सीहरु बताउँछन ।
उनले डेली मेललाई भनेका छन, ‘मलाई अनलाइनमार्फत थुप्रै महिलाको सन्देश आइरहेको छ । अधिकांशले म सँग सेक्स गर्न चाहेका छन । उनीहरूले मेरो बायोइपिक लिंगको बारेमा सुनेर सेक्स प्रस्ताव राखेका हुन । उनीहरुले मसँग यसकारण पनि सेक्स प्रस्ताव राखेका हुन् कि म विना दुखः घण्टौं सेक्स गर्न सक्छु ।’